म गर्भाशयसहित घर फर्किएँ |
म गर्भाशयसहित घर फर्किएँ
प्रकाशित मिति :2018-08-14 09:30:49
मैले ईव इन्स्लरले लेखेका योनिका कथा पढेकी छु । कयौं कथा पढेर रोएकी छु । कयौं कथाले त अझ सशक्त बन्न प्रेरणा दिएका छन् ।
त्यसैबाट प्रभावित भएर आज म युटेरसको कथा लेख्दै छु । हो मेरो आफ्नै युटेरस (गर्भाशय)को यथार्थ कथाः
गएको जुलाई महिना मेरो गर्भाशयको परीक्षणको महिना थियो । मैले काठमाडौंका पाँच भन्दा बढी अस्पताल गर्भाशय परीक्षणको लागि चहारें । दश भन्दा बढी डाक्टरलाई मेरो गर्भाशयको लेखाजोखा गराएँ ।
युटेरसभित्र फाईब्रोईड (गर्भाशयको भित्तामा पलाउने ट्युमर) भएको तथ्य त मलाई केही वर्षदेखि नै जानकारी थियो । तर, यसपटक यसको आकार बढेर असामान्य अवस्थामा पुगेको तथ्य पत्ता लाग्यो ।
डाक्टरहरूबाट अझ गर्भाशय र फेलोपीयन ट्युब (डिम्ब निष्काशन हुने ट्युब) नै हटाउनका लागि सुझाब शुरु भयो । तपाईं तीस वर्षको युवती हो र ! युटेरसको माया गर्ने ?
समाजको चरित्र सामन्तवाद, पितृसतात्मक हुँदै पुँजीवाद र भन्नमा समाजवादसम्म आउँदा पनि महिलाको प्रजनन् अंगमाथिको प्रहार रोकिएको छैन ।
अरु सन्तान जन्माउनु छैन, युटेरस किन चाहियो ? महिनावारी बन्द भएपछि त झन् यसको कुनै काम नै छैन । रोग पालेर किन राख्ने ? यसलाई हटाएपछि न रहन्छ बाँस, न बज्छ बाँसुरी । तपाईलाई नै ढुक्क हुन्छ जस्ता प्रहारले आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको सागरमा आफू शून्य शून्य महशुस गरायो ।
अस्पताल छिरेपछि मैले थाहा पाएँ, चिकित्सा विज्ञानले मेरो उमेरका महिलाको युटेरसलाई कसरी अवमुल्यन गरेको रहेछ । त्यसपछि मलाई लाग्न थाल्यो कि, मेरो युटेरसमाथि घेराबन्दी सुरु भएको छ ।
हुन त युटेरसमाथिको घेराबन्दी यो पहिलो पटक भने होइन । किशोरावस्थाबाट नै शुरु भएको हो । पहिलो महिनावारीलाई खतराको घन्टी बज्यो भन्दै हरपल होसियार रहनका लागि नैतिकताको घेराबन्दी ।
विवाह पश्चात वंश धान्नका लागि सन्तान, अझ छोरा जन्माउनका लागि सामाजिक घेराबन्दी । सन्तान जन्माई सकेपछि यो त रोगको घर हो जोखिम पालेर किन राख्ने ? यसलाई त हटाउनु पर्छ भन्दै चिकित्सा विज्ञानको घेराबन्दी ।
जब यी वादहरू एक अर्कामा मिसिन्छन्, त्यसले महिलाहरूमाथि झन् भयावह स्थिति सिर्जना गर्ने रहेछ । यसको सबैभन्दा अनौठो उदाहरण चिकित्सा विज्ञान हात धोएर युटेरसको पुँजीकरणमा लागेको देखिन्छ, जसको एउटा उदाहरण स्वयं भएँ ।
यसकारण महत्व छ युटेरसको
धर्मशास्त्रले समेत मानेको छ, युटेरसमा महिलाको सबैभन्दा बढी शक्ति केन्द्रित हुन्छ । विज्ञानले पत्ता लगाएको छ, महिलाको शरीरमा युटेरस हुनाले उनीहरूमा हृदयघातको समस्या कम हुन्छ ।
युटेरसमाथि विभिन्न रोगको जोखिम बढ्नुमा यसको बनावट जिम्मेवार हो भन्ने मलाई पटक्कै लाग्दैन । युटेरसमाथिको यो जोखिम प्राकृतिक हुँदै होईन । यो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो ।
मलाई अनौठो लागेको कुरा के भने, युटेरसबाट जीवन पाएका छोराछोरीहरू डाक्टर बने, वैज्ञानिक बने । तर, आमाको पहिचान जोगाउन होईन, पहिचान हरण गर्नमा उद्धत किन बने ?
अस्पतालको बेडमा रहँदा मेरो मनमा धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरू आए । किन विज्ञान युटेरस जोगाउने प्रविधिको विकासमा लाग्न सकेन ? विज्ञानको चमत्कार किन यसको विनासमा केन्द्रित रह्यो ? आखिर विज्ञान के का लागि ? कसका लागि ? के आधुनिक छोराछोरीहरू आमाको अस्तित्व जोगाउन असफल नै भएका हुन् त ? किन हरेक घरमा आज युटेरस बिनाका आमाहरू छन् ?
म लैंगिकताको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति । युटेरस महिलाको पहिचान हो । यो अस्थायी अंग होईन । यसको सम्बन्ध महिलाको शरीरसँग छ । मैले बुझेको सामान्य सत्य यही हो ।
रोगको सम्भावनाबाट शरीरका कुनै पनि अंग टाढा छैनन् । मैले बुझेको अर्को सत्य हो यो । त्यसकारण मैले आफ्नो युटेरसमाथिको निर्णय आफै गर्ने निधो गरें । मेरो निर्णयलाई साथ दिनुभयो, डाक्टर निरा सिंह श्रेष्ठले ।
उहाँले धेरै विकल्प मध्ये फाईब्रोईड मात्र हटाउन मिल्ने विकल्पमा सहमति गर्नु भयो । भोली के हुन्छ कसले के जानेको छ र ? आज उपलब्ध विकल्प मध्ये आफुलाई राम्रो लागेको विकल्प रोज्ने न हो ।
मैले त्यही गरें । यो विकल्प भोलीको लागि स्मार्ट च्वाइस (smart choice) नहुन पनि सक्छ । जोखिम जे आउँछ त्यसलाई जुधेर सामना गर्न त हामी महिलाले सायद गर्भमै सिकेर आएका छौं ।
म पनि भविष्यमा आउने जोखिमसँग जुध्न तयार छु । र, आज म युटेरससहित घर फर्किएको छु ।